Art sy fizahan-tany: Ahoana ny fampiasan'ny sary anay
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Italia » Art sy fizahan-tany: Ahoana ny fampiasan'ny sary anay
zavakanto sy fizahan-tany
Raha mitohy ny areti-mandringana ary miaraka amin'izay koa ny fiainana manomboka miadana miadana miverina tsikelikely, dia nankafy ny fisokafan'ny tranombakoka an'ny firenena koa i Italia. Izany dia ny fanomezana zavakanto miaraka amin'ny fiainana mety fiainana.
Misy hatrany ny fifampiresahana napetraka eo amin'ny asan'ny kanto sy ny mpijery azy.
Miampita ny sisintany manasaraka ny tontolontsika amin'ny sary hosodoko ireo mpijery.
Ny lafiny erotika sy manjavozavo amin'ny fifandraisana misy eo amin'ny sary sy ny fijery dia naseho tamin'ny farany.
Ny fisokafan'ny tranombakoka indray amin'ny ankamaroan'ny faritany italiana mitondra ny zava-kanto sy fizahantany dia nanokatra fahazavana sy fanantenana nandritra ny fotoana lava be sy feno korontana COVID-19 izay mbola mitohy. Fotoana iray ahazoana fanampiana ara-moraly sy ara-panahy ho an'ireo tia zavakanto italiana sy vahiny izay noterena am-bolana maro hanonofinofy hahazo ny ampahany amin'ny fahafahany very.
Mamelombelona ny zavakanto, sy ny fampirantiana ireo Galerie National Barberini Corsini notontosain'i Michele Di Monte dia nampiseho izany tamin'ny alàlan'ny fitsidihan'ny mpitsidika izay nahaliana ny antso hoe "Ahoana no ampiasan'ny sary antsika" - angano momba ny sangan'asa sary hosodoko 25 teo anelanelan'ny taonjato fahenina ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo .
"Ny fampirantiana," hoy i Flaminia Gennari Santori, talen'ny tranom-bakoka, "dia mampitombo ny fahalalàna ny sanganasa amin'ny fanangonana miaraka amin'ny fandraisana anjara sarobidy, manatsara hatrany ny politikan'ny fifanakalozana amin'ny tranombakoka hafa mikendry ny fanamafisana ny anjara andraikitra lehibe notontosain'ny galeriana eo amin'ny sehatra nasionaly sy iraisam-pirenena. ”
Ny sanganasa sasany avy amin'ny fanangonana ireo galeria nasionaly, dia fampindramam-bola avy amin'ny tranombakoka manan-danja, ao anatin'izany ny National Gallery any London, ny Museum Prado any Madrid, ny Rijksmuseum any Amsterdam, ny Royal Castle any Warsaw, ny di Capodimonte any Naples, ny Uffizi Gallery ao Florence, ary ny Savoy Gallery any Turin.
Amin'ny làlana iray mamakivaky sangan'asa 25, ny fampirantiana dia mikendry ny hijery ireo endrika fifanakalozan-kevitra am-pitokisana izay napetraka hatrany eo amin'ny asan'ny kanto sy ny mpijery azy ireo rehefa miresaka momba ny sary hosodoko.
Raha miresaka amin'ny mpihaino hatrany ny zavakanto, dia tsy voafetra amin'ny fijery tsotra fotsiny io antso io fa mila fandraisana anjara mavitrika sy fiaraha-miasa mavitrika.
Taorian'ny fampidirana an-tsehatra ny lohahevitry ny fampirantiana, miaraka amin'ny fampirantiana ny sangan'asan'i Giandomenico Tiepolo avy amin'ny tranombakoka Prado, "Il Mondo Novo," dia mizara 5 ny fampirantiana.
Ao amin'ny sehatra voalohany, "Ny tokonam-baravarana", ny varavarankely, ny zana-kazo ary ny ambainy dia manasa antsika hiampita ny sisintany manasaraka ny tontolontsika amin'ny an'ny sary hosodoko; toy ny mitranga amin'ilay “Girl in a Frame” mahavariana nataon'i Rembrandt, avy ao amin'ny Royal Castle any Warsaw izay toa miandry antsika ankoatry ny sary.
Nanjary miharihary ity fanasana malemy paika ity ao amin'ny fizarana manaraka, "Ny antso", izay misy ny sary toa ny "Sofonisba Anguissola" an'ny poeta Giovan Battista Caselli, "Venus, Mars ary ny Fitiavana" nataon'i Guercino, na "La Carità" (the Charity ) nataon'i Bartolomeo schedoni dia ampahibemaso amin'ny mpijery ary mitaky ny sainao.
Ao amin'ny fizarana 2 afovoany, "Ny tsy mahay mandanjalanja" sy "Ilay mpiray tsikombakomba aminy", ny fidiran'ny mpandinika dia nanjary saro-pantarina kokoa, tia miresaka, miafina ary mahamenatra mihitsy aza. Ny mpijery dia nantsoina mba hijoro amin'ny zavatra hitany, ary amin'ny tranga sasany dia tsy tokony ho hitany akory, toy ny amin'ny fisokafan'i Simon Vouet hoe "Mirary soa", "Judith and Holofernes" mpamitaka an'i Johann Liss, na ao amin'ny "Famoahoan'i Noa" nataon'i Andrea Sacchi.
Ny fampirantiana dia mifarana amin'ny fizarana natokana ho an'i "Voyeur" izay nanehoana ny lafiny erotika sy manjavozavo ny fifandraisana misy eo amin'ny sary sy ny fijery. Ao amin'ny sary hosodoko "Lavinia Fontana," van der Neer na Subleyras, ilay mpitsangatsangana, dia tsy mijery fotsiny ilay zavatra notadiaviny fa toa hitany koa ny fijeriny, ny naha mpijery azy tanteraka.
Ity ny fikapohana ny coronavirus ary mamelombelona ny kanto, mivezivezy ary miaina ny tenany.